Asa 27 - Ny Baiboly
Asa toko 27
Ny dian'i Paoly nankany Roma - Ny nahatongavany tany Kereta - Ny nanjò teny ambonin'ny ranomasina - Ny naminanian'i Paoly fa tsy haninona ny mpiantsambo rehetra - Ny nahatongavany tany Malta.
1Raha voadidy hiondrana an-tsambo hankany Italia izahay, dia natolotra ny kapiteny anankiray atao hoe Joliosa, amin'ny antokon'i Aogosta, i Paoly sy ny mpifatotra sasany. 2Dia niakatra tamin'ny sambo anankiray avy any Adramita hanaraka ny sisin-tanin'i Asia izahay, ka nony voampakatra ny vatofantsika, dia niainga; ary niaraka taminay koa Aristarka Masedoniana avy any Tesalonika. 3Nony ampitso dia tonga tany Sidòna izahay. Ary tsara ny nitondran'i Joliosa an'i Paoly, fa navelany hankany amin'ny sakaizany sy handray zavatra avy amin'ireny izy. 4Niala teo izahay, dia nanara-morona an'i Sipra, fa nanoha rivotra. 5Ary rahefa namaky ny ranomasin'i Silisia sy Panfilia izahay, dia tonga tany Mira any Lisia. 6Teo no nahitan'ny kapiteny sambon'i Aleksandria anankiray hankany Italia, ka dia nafindrany tao izahay. 7Niadam-pandeha ny sambonay nandritra ny andro maromaro, ary nananosarotra erý izahay vao tonga tandrifin'i Knida, fa nanoha anay ny rivotra. Dia nanara-morona an'i Kreta tandrifin'i Salmone izahay.
8Nony efa nisahirana nanara-morona izahay, dia tonga tamin'ny fitoerana anankiray atao hoe Tsarafitodiana, takaikin'ny tanàna Talasà. 9Nony afaka andro maromaro, dia tsy nahatoky intsony ny mandeha an-tsambo, fa efa lasa ny andro fifadiana, ka notoroan'i Paoly hevitra ny mpiantsambo, 10nataony hoe: Ry sakaiza, hitako fa hanimba sy hampididoza antsika izao fandehanana an-tsambo izao; sady tsy ny entana sy ny sambo ihany, fa ny aintsika koa aza. 11Ny tenin'ny mpitondra sy tompon-tsambo anefa no ninoan'ny kapiteny noho ny an'i Paoly. 12Ary tsy tsara hitoerana amin'ny ririnina ny fitodian-tsambo teo, ka dia nataon'ny maro fa tsara ny miala eo sy manao izay hahatongavana any Fenisy, dia handany ny ririnina any; fitodian-tsambo any Kreta izany, izay manatrika ny rivotra avy any atsimo andrefana sy avaratra andrefana.
13nitsoka malemy kosa ny rivotra avy any atsimo tamin'izay, ka nataon'izy ireo fa ho tanteraka izay niriny, dia niala tao izy ireo, ka nandalo akaikikaikin'i Kreta. 14Nony afaka kely foana anefa, dia namely ny tafio-drivotra avy any avaratra atsinanana, izay atao hoe Eoroakilòna, 15ka nopaohin'ny rivotra ny sambo, fa tsy nahatoha azy, ka navelanay hoentiny amin'izay halehany. 16Dia nentiny tany akaikin'ny nosy anankiray atao hoe Kaodà izahay, ka saiky tsy tafakatray ny salopy. 17Nony tafakatra io, niala nenina ny matilò mba hamonjy anay; nafatony nanodidina ny sambo, ary nampidininy ny lay, fa natahorany hihitsoka amin'ny vorim-pasika ny sambo, dia navelany handeha amin'izay halehany. 18Nony ampitso, mbola nasian'ny tafio-drivotra mafy izahay, ka nanariana ny entana. 19Ary tamin'ny andro fahatelo aza, dia ny tànanay mihitsy no nanary ny fanaky ny sambo. 20Nandritra ny andro maro ny masoandro aman-kintana tsy hita intsony, ny tafio-drivotra namely mafy, ka dia tsy nanantena ho voavonjy intsony izahay.
21Ary nony ela no nifadian-kanina, dia nitsangana teo afovoan-dry zareo Paoly, ka nanao hoe: Ry sakaiza, tsara raha nihaino ahy hianareo, ka tsy niala tao Kreta, mba tsy hiharan'izao loza amam-patiantoka izao. 22Ary na dia ankehitriny aza, dia mamporisika anareo aho mba samy hatoky tsara, fa tsy hisy ho faty hianareo, ny sambo ihany no ho very. 23Fa nisy anjelin'Andriamanitra izay Tompoko sady tompoiko niseho tamiko halina, 24nanao hoe: Aza matahotra, ry Paoly, fa tsy maintsy hanatrika an'i Sezara hianao, ary indro efa nomen'Andriamanitra anao izay rehetra miara-miantsambo aminao. 25Koa amin'izany, matokia hianareo, ry sakaiza; fa matoky an'Andriamanitra aho, ka ho tanteraka izay voalaza tamiko. 26Nefa tsy maintsy ho fefika eo amin'ny nosy anankiray isika.
27Tamin'ny alina fahefatra ambin'ny folo, raha navezivezin'ny ranomasina Adriatika izahay, ilay sahabo ho nisasaka tsara iny ny alina, dia nataon'ny matilò fa nanakaiky tany izahay, 28ka nanaka-drano izy ireo, ary hitany fa faharoa-polo refy ny halaliny; nony nandroso kelikely indray notsapainy ka nisy fahadimy ambin'ny folo refy. 29Ary natahotra ny hidona amin'ny harambato izy ireo, ka nandatsaka vatofantsika efatra teo ambody sambo, dia naniry ny andro ho maraina. 30Nitady handositra hiala amin'ny sambo ny matilò tamin'izay, ka nampidina ny salopy eo amin'ny ranomasina, nody handatsaka vatofantsika ao an-doha sambo; 31fa hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila: Raha tsy mitoetra eto an-tsambo ireo, tsy ho voavonjy hianareo. 32Dia notapahin'ny miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny salopy, ka navelany ho latsaka izy.
33Nony nazava ratsy ny andro, dia namporisika ny olona rehetra hihinan-kanina i Paoly, nanao hoe: Anio fahefatra ambin'ny folo andro niaretanareo ny fifadian-kanina, sady tsy nitendry hanina akory hianareo. 34Koa mamporisika anareo hihinan-kanina aho, fa ilaina hamonjena anareo izany; ary tsy ho very aminareo rehetra, na dia ny singam-bolonareo iray akory aza. 35Nony avy nilaza izany izy, dia nandray mofo, ka nisaotra an'Andriamanitra teo anatrehan'izy rehetra; ary novakiny ny mofo dia nihinana izy. 36Nahazo toky terý izy rehetra, ka nihinana koa. 37Enina amby fito-polo sy roan-jato no isanay rehetra teo anaty sambo. 38Ary rahefa voky izy ireo, dia nanariany tany anaty ranomasina ny varimbazaha, mba hanamaivana ny sambo.
39Nony nazava ny andro, dia tsy fantatr'izy ireo ny tany teo; fa helo-drano anankiray tsara morona izay no hitany, dia teo no nokasainy hampiantsonana ny sambo raha azony atao. 40Ka nesoriny ny vatofantsika, nalefany ho any an-dranomasina; novahany ny mahazakan'ny fanamory, novelariny koa ny lay teo an-doha sambo mba ho azon'ny rovitra, dia nanatona ny tany izy ireo. 41Nony tonga tao amin'ny andilan-tany anankiray izy, dia niantsona teo ny sambo; ka ny loha sambo moa nihizina tsy afa-nihetsika teo, fa ny vody sambo kosa vaky azon'ny herin'ny onja. 42Niray tetika hamono ny mpifatotra ny miaramila, fandrao misy mitsoaka milomano izy ireo, 43nefa tsy navelan'ny kapiteny hanao izany izy ireo noho ny fitiavany hamonjy an'i Paoly. Izay nahay nilomano aloha no nasainy hirotsaka hiakatra eny an-tanety, 44ary ny sisa kosa nasainy nitaingina hazo fisaka na zavatra hafa tao an-tsambo. Dia tonga soa aman-tsara teny an-tanety avokoa ny olona rehetra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0760 seconds